Global Voices teny Malagasy » Taratasim-pifandraisan’ny mpandika ES-EN : Kambana mpandika, ny Lalàmpanorenana Meksikàna ary zavatra hafa maro! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Jona 2019 15:49 GMT 1	 · Mpanoratra Marianna Breytman Nandika Sylvia Aimée
Judy & Dagmar Jenner dia kambana manao asa fandikàna lahatsoratra sy fandikàna teny, ary manana ny fandraharahàny manokana antsoina hoe Twin Translations. Ao anatin'ity lahatsoratra am-bilaogy ity , entiny ho antsika ny lisitr'ireo torolàlana entina manomboka ny indostrian'ny fandikàna sy manokana adihevitra isian'ny fanehoankevitra ihany koa. Amin'ny famaliana ity tohinkevitra ity, topazo maso ary zarao ny sasany amin'ireo torohevitra tsara indrindra avy aminareo!
Vao haingana ny ProZ, iray amin'ireo sehatra midadasika indrindra ho an'ireo mpandika manao ny velontenany, no nanokatra ny fanendrena an'ireo izay hifaninana amin'ny Loka Community Choice  karakarainy, hankasitrahana “ireo matihanina mpikirakira ny teny izay mavitrika, inoan-teny, na miavaka anaty media samihafan'ilay indostria.” Afaka mieritreritra maro amin'ireo mpandray anjara ato amin'ny GV mahafeno tsara izay famaritana izay aho , araka izany raha mahafantatra olona mavitrika ao amin'ny ProZ ianareo ary mihevitra fa tokony homena azy ilay Loka Community Choice, tendreo ry zareo eto ! (Fanamarihana: efa vita izy ity ary tamin'ny 18 Aogositra 2015 ny fetra farany nandraisana ny fandrotsahana anarana)
Tsy ela akory izay ny Philadelphia Inquirer dia namoaka lahatsoratra iray miaraka amin'ireo tatitra momba ny fitadiavana mpiasa mpandika tao Etazonia — ary toa nandeha tsara ny zavatra rehetra! Ny indostrian'ny fandikàna no “sehatr'asa fahadimy miroborobo haingana indrindra ao amin'ny firenena” ary ireo matihanina dia manoro hevitra hoe arakaraky ny anananao fahalalàna teknika, no mahalafolafo kokoa ny karama raisinao. Vakio misimisy kokoa ato !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/14/140442/
 bilaogy ity: http://translationtimes.blogspot.com/2015/07/getting-started-10-tips.html
 Nanambara androany ny : http://www.ibtimes.com/bilingual-mexico-constitution-spanish-mayan-translation-complete-after-years-2040501
 Loka Community Choice: http://www.proz.com/forum/prozcom_translator_coop/288329-2015_prozcom_community_choice_awards_nominations_now_open.html